कोरोना कहर : विप्रेषण आय सवा चार अर्बले घट्यो - नेपालबहस
कोरोना कहर : विप्रेषण आय सवा चार अर्बले घट्यो
| २२:२७:३१ मा प्रकाशित
८ भदौ, काठमाडौं । कोरोना कहरका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा विप्रेषण आयमा रु चार अर्ब २४ करोडले गिरावट आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रहेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विप्रेषण आप्रवाहमा ०.५ प्रतिशतले कमी आई रु आठ खर्ब ७५ अर्ब ३ करोड कायम भएको छ ।
आव २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा मात्रै रु चार अर्ब २४ करोडले घटेको हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार पुगेका विभिन्न श्रम गन्तव्य लामो समयदेखि बन्द हुँदा समेत विप्रेषण आयमा खासै प्रभाव नपरेको पाइएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आव २०७६/७७ को वार्षिक विवरण अनुसार विप्रेषण आयमा खासै प्रभाव नपरेको पाइएको हो । आव २०७६/७७ मा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३.३ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ७.८ प्रतिशतले बढेको थियो । आव २०७६/७७ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति ‘संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकीकरण’ लिने नेपालीको संख्या २०.५ प्रतिशतले घटेको छ ।
अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ३२.६ प्रतिशतले घटेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा वर्षमा ३४.७ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सङ्ख्या ५.४ प्रतिशतले बढेको थियो । आव २०७६/७७ मा खुद ट्रान्सफर आयमा १.३ प्रतिशतले कमी आई रु नौ खर्ब ८२ अर्ब २२ करोड कायम भएको छ ।
अघिल्लो वर्ष यस्तो आय १५.० प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा भने विप्रेषण आप्रवाह ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १०.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद बैठक शुरु ८ मिनेट पहिले
देउवाविरुद्ध मोर्चाबन्दी शुरु, पौडेल र सिटौलाबीच छलफल ८ मिनेट पहिले
खोलाले बगाउँदा वृद्ध दम्पतिको मृत्यु ११ मिनेट पहिले
नगद ९८ हजारसहित १३ जना जुवाडे पक्राउ १४ मिनेट पहिले
पोखराबाट लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ १८ मिनेट पहिले
पर्यटनमन्त्री भट्टराईको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन २१ मिनेट पहिले
आज विश्व पर्यटन दिवस: एउटै मञ्चमा ५० देशका राष्ट्रगान गुञ्जिए ! २६ मिनेट पहिले
नव गायिका अश्मिता परियारको नयाँ गित “कुन सुरुवात” २८ मिनेट पहिले
प्रमोद र सुजाताको ‘ओई कान्छी’ मा पल र पुजाको रोमान्स ३८ मिनेट पहिले
झापाका संक्रमितको विराटनगरमा ज्यान गयो ४० मिनेट पहिले
विदेशमा कोरोनाबाट थप २१ जना नेपालीको मृत्यु : एनआरएनए ५० मिनेट पहिले
पद्मश्री साहित्य सम्मान ‘हंस’लाई, तर प्रश्रितसँग पुरस्कार नलिने उप्रेतिको घोषणा ५३ मिनेट पहिले
निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही शुरु ५५ मिनेट पहिले
यसकारण शेखर कोइराला कांग्रेसको सभापति बन्नुपर्छ ४ हप्ता पहिले
नेकपा नगर कमिटी सचिव कोइरालालाई बलात्कार आरोप २ महिना पहिले
अब एटीएम बुथमा स्यानिटाइजर अनिवार्य १ महिना पहिले
सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दाका तीन फरार प्रतिवादी पक्राउ ४ हप्ता पहिले
सिद्धार्थ राजमार्ग ४ हप्ता पहिले
भारतको ७४औँ स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीद्वारा बधाई तथा शुभकामना १ महिना पहिले
अनिश्चितकाल निषेधाज्ञा २ महिना पहिले
डेढ करोडको जलपान हो कि मदिरापन ? २ महिना पहिले